Faka iJava 8, 9 kunye ne-10 kwi-Ubuntu 18.04 kunye neziphumo | Ubunlog
Java ngaphandle kwamathandabuzo lulwimi lwenkqubo esetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo kwaye yinto ebaluleke kakhulu ekuphumezeni nasekusebenziseni izixhobo ezahlukeneyo, Ukufakwa kweJava kungumsebenzi obalulekileyo emva kokuba wenze ufakelo lweJava.
Yiyo loo nto Ngeli xesha ndiza kwabelana nawe ngesifundo esilula sendlela yokufaka iJava kwinkqubo yethu ene-JDK eyimeko yophuhliso kunye nokusingqongileyo kweJRE.
Sineendlela ezimbini zokufaka Inkqubo yethu enye yazo isebenzisa iiphakeji abasinike zona Ukusuka koovimba abagcina Ubuntu enye kungenxa ye-el Ukusetyenziswa kwendawo yokugcina umntu wesithathu.
1 Uyifaka njani iJava kwi-Ubuntu 18.04 evela koovimba?
2 Uyifaka njani enye indlela yasimahla yeJava kwi-Ubuntu 18.04?
3 Uyifaka njani iJava ku-Ubuntu 18.04 esuka kwi-PPA?
4 Uyifaka njani iJava 10 kwi-Ubuntu 18.04 kunye neziphumo?
5 Ukwenza ngokwezifiso ufakelo lweJava
Uyifaka njani iJava kwi-Ubuntu 18.04 evela koovimba?
Ukufaka iJava kunye neeplagi zayo Singayenza ngokuzixhasa ngeSynaptic okanye nakwisiphelo.
NgeSinaptic sisebenzisa kuphela injini yokukhangela ukukhetha iipakeji esifuna ukuzifaka.
Ngelixa, kunye nesiphelo sendlela, kufuneka siyivule kwaye senze le miyalelo ilandelayo.
Kuqala kufuneka sihlaziye inkqubo ngo:
Kwaye ekugqibeleni sifaka iJava ngalo myalelo:
Ngexesha ukufaka indawo yokuphumeza esiyenzayo:
ukuba jonga ukuba sifake iJava kwinkqubo yethu kufuneka siphumeze kuphela:
Yiyiphi eya kubuyisa impendulo kunye nenguqulo yethu yeJava efakiweyo.
Uyifaka njani enye indlela yasimahla yeJava kwi-Ubuntu 18.04?
Kubalulekile ukuba uyazi loo nto sinezinye iindlela zasimahla kwiJava esinokuyifaka ngokuthe ngqo kwii-Ubuntu zokugcina.
Ubuntu obuqulethe uguqulelo lomthombo ovulekileyo Iibhanari zeJava ngexesha lokubaleka ibizwa ngokuba yi-Open JDK.
Ukufaka i-Ubuntu Java Open JDK Uhlobo lwe-11 kufuneka sivule i-terminal kwaye siphumeze:
Ukufaka Ubuntu Java Open JDK version 9 run:
Kwaye iJava Open JDK 8 run:
Uyifaka njani iJava ku-Ubuntu 18.04 esuka kwi-PPA?
Enye indlela ekhankanyiweyo yayiyi ngokusebenzisa iPPA yomntu wesithathu, ukufakelwa kweJava kwikhompyuter yethu siya kusebenzisa indawo yokugcina izinto ukuba abafana kwiwebhuupd8team basinike.
Apha kufuneka ndicacise loo nto kolu luhlu banenguqulo yesi-8 neye-9 yeJava ke uya kukhetha ukuba yeyiphi na inguqulelo oza kuyifaka.
Ukufaka Inguqulelo yesi-8 yeJava:
ukuba Ityala leJava 9 siliphumeza:
Uyifaka njani iJava 10 kwi-Ubuntu 18.04 kunye neziphumo?
Kuba banokuphela kuphela kwinguqu yesithoba yeJava kwindawo endala, Kufuneka sisebenzise enye indawo yokugcina izinto xa sifuna ukufaka iJava engu-10 kumaqela ethu.
Le nguqulo sele ikhona ixesha elithile kwaye izisa ezi zinto zilandelayo:
Umhlanganisi wexesha nje lokulinga obizwa ngokuba yiGraal unokusetyenziswa kwiqonga leLinux / x64
uhlobo lokuguquguquka kwendawo.
ekwabelwana ngayo iklasi yedatha yesicelo, evumela ukuba iiklasi zesicelo zibekwe kwifayile ekwabelwana ngayo ukunciphisa ukuqala kunye nonyawo lwezicelo zeJava.
Ukwazisa ngeDocker: KwiLinux, i-JVM ngoku ibhaqa ngokuzenzekelayo ukuba iyasebenza kwisitya seDocker
Ukwenza oku kwisiphelo sendlela siwenza lo myalelo wokuwongeza kuluhlu lwethu lokugcina:
Sihlaziya oovimba bethu nge:
Kwaye ekugqibeleni sifaka ngalo myalelo:
Ukwenza ngokwezifiso ufakelo lweJava
IJava isivumela ukuba sibe neenguqulelo ezahlukeneyo ezifakwe kwisistim, esinokuthi sikhethe ukuba yeyiphi na inguqulelo esiza kusebenza kuyo ngaphandle kwesidingo sokubuyisela ingxelo yangaphambili ngaphandle kokuphelisa eyangaphambili.
Ngokusebenzisa ezinye iindlela zokuhlaziya
Sinokwenza olu luqwalaselo lusivumela ukuba silawule amakhonkco okomfuziselo oza kusetyenziswa kwimiyalelo eyahlukeneyo.
Izakubonisa iinguqulelo ezahlukeneyo zeJava esizifakileyo, esinokuthi siphawule okanye sitshintshe ingxelo emiselweyo ngokukhetha le siyithandayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Faka iJava 8, 9 kunye ne-10 kwi-Ubuntu 18.04 kunye neziphumo
Molo ngokubhekisele ku «Sudo update-alternatives –config java», ngenxa yokuhambelana izizathu ndifakele iinguqulelo ezimbini zeJava, 11 ngokungagqibekanga kunye nesi-8 (Isikhokelo) sokuhambelana kwezicelo zobuntu ezindala:
Ubume beNdlela ePhambili
* 0 / usr / lib / jvm / java-11-openjdk-amd64 / bin / java 1101 indlela ezenzekelayo
1 / usr / lib / jvm / java-11-openjdk-amd64 / bin / java 1101 imowudi yemanyuwali
2 / usr / lib / jvm / java-8-openjdk-amd64 / jre / bin / java 1081 imowudi yemanyuwali
Ndingakusombulula njani ukusebenza kwezi zicelo ngeJava8, ukuze ndisebenzise inguqulelo yesi-8 kwaye ndingazisi inguqulelo ye-11?
Java endala_app_name -> ayisebenzi
/ usr / lib / jvm / java-8-openjdk-amd64 / jre / bin / java old_app_name -> ayisebenzi
Enkosi, ndiyabulisa kuDavid.
* shiya i-linck ukuze kube lula *
Andikwazi ukufaka iJava 8, ngubani owaziyo ukuba njani? Kwi-ubuntu 18.04.1 lts
molo, ungafaka iJava 8 kubuntu bakho 18.04.1 lts ukuba kunjalo, ndiphendule njengombulelo
Andikwazi ukufaka iJava 8 kwinkqubo yam ye-18.04 lts nokuba
UMitik 456 sitsho
Bantu, ndiyotuber, ukuba awazi nto, hamba ngejelo lam ndedwa, ndinokuxelela izinto ezininzi malunga nobuntu.Ijelo lam: Mitik456 -_-
Eli phepha lihle